I-RoboVac X80 kunye ne-HomeVac H30, ukubheja kweemfuno ezintsha kwi-eufy | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 08/09/2021 17:03 | ngokubanzi, Izaziso
Uphawu lwengcali kwimishini ezenzekelayo yasekhaya kunye nezinto onokukhetha kuzo kwi-eufy yasekhaya egqibe kwelokuba ubheje ngokungena ngokupheleleyo kwimakethi yokutsala ngenketho RoboVac X80 Abakubiza ngokuba sesona sicoci seerobhothi sihambele phambili kwintengiso, kunye nesixhobo sokucoca ngesandla esiphathwayo IkhayaVac H30, Siza kubazi ngokunzulu ngeenkcukacha zabo kunye neempawu ezintsha.
2 EkhayaVac H30
RoboVac X80 sisicoci sokucoca irobhothi sokuqala kwihlabathi ukubandakanya itekhnoloji yokubumba
injini yomoya, leyo Inikezela ngeemoto ezimbini ze2Pa yamandla okutsala. Oku kwandisa kakhulu uxinzelelo lwerobhothi, ukwazi ukuphucula ingqokelela yeenwele zasekhaya ngama-57,6% * ngaxeshanye ixesha elichithwe ngokucoca ngokufanelekileyo kunye nokusebenza ngempumelelo eyodwa. Nge-RoboVac X80 Hybrid, ukucocwa okunzulu kunokwenzeka kunye nokusebenza kwayo kokubini kokucoca kunye nokutshiza ngaxeshanye. Izinga lokusetyenziswa kwetanki lokungcola lenyuke nge-127% *, lifikelela
umthamo ukuya kuthi ga kwi-600ml.
*> Ulwazi olunikezelwa ngophawu
Ngokudibeneyo, ukuhamba kwe-iPath laser kunye neetekhnoloji zemephu ezikrelekrele ezixhaswe yi
Ubukrelekrele bobugcisa (Imephu ye-AI 2.0) yenza imephu echanekileyo yendlu enceda iirobhothi zibale a
inkqubo yokucoca ngokufanelekileyo ngaphandle kokulibala nayiphi na ikona.
Okwesibini kwezinto ezintsha ezinikezelwe namhlanje yi-HomeVac H30 yokucoca ngesandla,
ebonelela ngeendlela ezahlukeneyo mihla le. Ngenkqubo yayo ye-TriPower TM enobuninzi bokutsala,
kulula ukugcina indawo icocekile, usempilweni kwaye ukhululekile kuzo zonke iintlobo zezinto ezaliwa ngumzimba. Uyilo lwakhe
icwecwe kwaye ayisindi, ilungile I-808 gram yobunzima, yenza kube lula ukuyisebenzisa ixesha elide
yexesha ngelixa ugcina indawo yetanki lokungcola le 250ml kubandakanya i
Itekhnoloji yokuhluza uthuli ukususa iinwele zeefilitha ngokulula.
Kuxhomekeke kwiphakheji ekhethiweyo, iHomeVac H30 inokubandakanya izixhobo zokucoca imoto, a
Ibrashi enemoto eqhuba ukucoca iinwele zezilwanyana, nakwi Ikhithi engapheliyo, ibrashi ye
imigangatho elukhuni ekwaziyo ukucoca kunye nokugqobhoza kwelinye ipasi.
Iimodeli ezintsha ziya kubakho ukuthenga eSpain ekupheleni kukaSeptemba ngo
Amazon. Intsapho yeRoboVac X80 iqala nge- € 499,99 kwaye imodeli yeX80 Hybrid iya kubiza i-549,99.
I-HomeVac H30 inexabiso lokuqala le- $ 159,99, eyahluka ngokuxhomekeka kuguqulelo kunye nezixhobo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-RoboVac X80 kunye ne-HomeVac H30, ukubheja kweminqweno emitsha evela eufy